Terms & Mamiriro ezvinhu - hannari-shopu
Iyi webhusaiti ino shandiswa hannari-shopu. Munzvimbo iyi yese, mazwi anoti "isu", "isu" uye "vedu" anoreva hannari-shopu. hannari-shop inopa iyi webhusaiti, inosanganisira yese ruzivo, zvishandiso, uye masevhisi aripo kubva pane ino saiti kwauri, mushandisi, yakatarwa pamusoro pekugamuchira kwako zvese zvirevo, mamiriro, mirimo, uye ziviso zvinotaurwa pano.
By kushanyira kwedu nzvimbo uye / kana vanotenga chinhu kwatiri, imi tichiita "Service" yedu uye kubvumirana kuti akasungwa anotevera mashoko uye mamiriro ezvinhu ( "Terms of Service", "Terms"), kusanganisira mamwe mashoko iwayo uye mamiriro ezvinhu uye mitemo Zvinyorwa ino uye / kana kuwanikwa kuburikidza hyperlink. Terms aya Service anoshanda zvose vanoshandisa nzvimbo, kusanganisira pasina kwezvokushandisa vanoshandisa vari browsers, vapemhi, vatengi, vatengesi, uye / kana mipiro pamusoro neizvozvi.
Tapota verenga Terms aya Service vasati kuwana kana kushandisa Website yedu. By kuwana kana kushandisa chero chikamu nzvimbo, iwe uchibvuma kuti akasungwa Terms aya Service. Kana usingabvumirani ose mashoko uye mamiriro ezvinhu chibvumirano ichi, ipapo iwe urege kuwana Website kana kushandisa chero mabasa. Kana Terms aya Service vanoonekwa uzodzoka, kugamuchirwa zviri zvakajeka chete Terms idzi Service.
Chero zvimwe zvitsva kana nematurusi izvo kuwedzera magetsi kuchitoro uchavawo pasi Terms of Service. Unogona kudzokorora kupfuura mamiriro shanduro Terms of Service chero nguva papeji ino. Isu kuchengetera kodzero kunatsurudza, kushandura kana kutsiva chimwe chikamu Terms ava Service kuburikidza vaiswe inogadziridza uye / kana kuchinja Website yedu. Zviri wako basa kuongorora peji ino nguva nenguva kuti kuchinja. Your akaramba kushandisa kana kuenda Website kutevera Posting kuchinjwa kunoreva kubvuma kuchinja ivavo.
Shamba redu rakagadzirwa paChipifyify Inc. Vanotipa iyo inotengeswa e-commerce platform iyo inotitendera kutengesa zvigadzirwa nemishandiro kwauri.
CHIKAMU 1 - ONLINE STORE MASHOKO
Nokubvumirana neMitemo yeBasa, iwe unomiririra kuti iwe unenge uine makore ehuwandu munyika yako kana chirongwa chekugara, kana kuti iwe uri wehuwandu munyika yako kana purovhinzi yaunogara uye iwe wakatipa mvumo yako Bvumira chero mumwe wevaduku vako vanogona kushandisa sendimi iyi.
Iwe haungashandisi zvigadzirwa zvedu kune chero chinangwa chisina mvumo kana chechibvumirano uye iwe iwe, mukushandiswa kweBasa, unotyora mitemo chero ipi zvayo munharaunda yako (kusanganisira asi kwete kumiganhu yemitemo yekodzero).
CHIKAMU 2 - GENERAL CONDITIONS
Unobvumirana kuti usabereka, kuverenga, kutengesa, kutengesa, kutengesa kana kushandisa chero chikamu cheBasa, kushandiswa kweBasa, kana kusvikirwa neHurumende kana chero ruzivo rwepawebsite kuburikidza nehupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi huripo, kunze kwekunyora kunyoresa mvumo nesu .
CHIKAMU 3 - KUZVIPA, KUPEDZISIRA, uye KUTYA KWEMAHARA
CHIKAMU 4 - ZVINODZIDZISWA KUVASHANDI NEZVAPITI
CHIKAMU 5 - MITIMA KANA MAHERO (kana zvichibvira)
Takaedza zvose kuratidza zvakajeka sezvinobvira mavara nemifananidzo yemichina yedu inowanikwa muchitoro. Hatigone kuvimbisa kuti kombiyuta yako yekuona yekuratidza chero ruvara ichave yakarurama.
Tinochengetedza kodzero asi hatisi kusungirwa, kuderedza kutengesa kwezvinhu zvatinotengesa kana Mishandira kune chero munhu, nzvimbo kana hutongi. Isu tingashandisa kodzero iyi pane imwe nyaya-ne-case. Tinochengetedza kodzero yekugadzirisa huwandu hwezvimwe zviwanikwa kana mabasa atinopa. Zvose zvinotsanangurwa zvekutengesa kana kwekutengesa kwezvinhu zvinogona kuchinja chero nguva pasina chiziviso, pamusana pekuziva kwedu. Tinochengetedza kodzero yekurega chero chigadzirwa chero nguva. Chipi nechipi chekugadzirira chero chigadzirwa chero chipi kana basa rinoitwa panzvimbo ino hazvibvumirwi pane zvakarambidzwa.
CHIKAMU 6 - KUVARIDZA KWEBILLING AND ACCOUNT INFORMATION
Iwe unobvumirana kupa huri ikozvino, hwakakwana uye hwakakwana kutenga nokutengesa ruzivo rwezvose zvekutenga kunoitwa mudura redu. Unobvumirana nekugadzirisa purogiramu yako nehumwe ruzivo, kusanganisira email yako kero uye nhamba dzekadhi rechikwereti uye mazuva ekupera kwegore kuitira kuti tikwanise kupedzisa zvekutengesa uye tibatane newe sezvaunoda.
Nokuti zvakadzama, tapota kuongorora Returns edu Policy.
CHIKAMU 7 - ZVINHU ZVOKUDZIDZA
Tingada, munguva yemberi, kupa mabasa matsva uye / kana zvimwe kuburikidza Website (kusanganisira, kubudiswa maturusi itsva uye pfuma). zvinhu zvitsva zvakadai uye / kana mabasa anofanira kuva pasi Terms idzi Service.
CHIKAMU 8 - THIRD-PARTY LINKS
Isu hatisi mhaka yekukuvadza kana kukanganisa kwakabatana nekutenga kana kushandiswa kwezvigadzirwa, maitirwo, zvigadzirwa, zvigadzirwa, kana zvimwe zvinotengeswa zvakagadzirwa maererano newebsite yechitatu. Ndapota fungisisa zvakanyatsoongorora mitemo nemagariro evanhu vatatu uye ita nechokwadi chokuti unozvinzwisisa usati wapinda mune chero kutengesa. Zvipomera, zvinodaro, zvinonetsa, kana mibvunzo pamusoro pezvinhu zvechitatu-party zvinofanira kutaurirwa kune wechitatu.
CHIKAMU 9 - MAHARA MAHARA, FEEDBACK, NEZVIMWE ZVINANGWA
Kana, kana tichikumbira, unotumira zvimwe zvinyorwa (somuenzaniso masangano ekupikisa) kana pasina chikumbiro kubva kwatiri unotumira zvisikwa zvekugadzira, mazano, zvigadziro, zvirongwa, kana zvimwe zvinhu, kana iri paIndaneti, neIndaneti, nepositi yepositi, kana zvimwe (Pamwe chete, 'kuratidza'), unobvumirana kuti tinogona, chero nguva, tisingabvumirwi, shandura, kukopa, kuparidzira, kuparadzira, kushandura uye zvimwe kushandiswa mune chero zvinyorwa chero zvipi zvaunotitumira. Isu tiri uye tichava pasi pekusungirwa (1) kuchengetedza zvinyorwa mukutenda; (2) kubhadhara mubhadharo wezvakataurwa; Kana (3) kupindura kune chero zvataurwa.
Tingatova, asi havana musengwa, tarisisa, Edit kana kubvisa kugutsikana kuti tingaziva yedu bedzi kungwara tiri nomutemo, zvinotsamwisa, kuvhundudzira, libelous, kwokuchera, zvinonyadzisira, majee kana zvimwewo zvinhu kana achityora chipi mubato pfuma zvedzidzo kana Terms aya Service .
CHIKAMU 10 - PERSONAL INFORMATION
CHIKAMU 11 - MASHOKO, INACCURACIES NEMEMISORO
Dzimwe nguva panogona kuve neruzivo pane yedu saiti kana muSevhisi iyo ine typographical zvikanganiso, zvisirizvo kana kusasiya izvo zvingaenderana nekutsanangurwa kwechigadzirwa, mutengo, kukwidziridzwa, kupa, kutengesa kwekutengesa zvigadzirwa, nguva yekufambisa uye kuwanikwa. Isu tine kodzero yekugadzirisa chero zvikanganiso, zvisirizvo kana kubviswa, uye kuchinja kana kugadzirisa ruzivo kana kudzima mirairo kana chero ruzivo paSevhisi kana pane chero webhusaiti yakabatana isirizvo chero nguva pasina ziviso yapamberi (kusanganisira mushure mekunge maendesa tsamba dzenyu) .
Isu hatina basa rekugadzirisa, kuchinja kana kujekesa ruzivo muSebhisi kana pane chero webhusaiti yakabatana, kusanganisira pasina mirefu, ruzivo rwemari, kunze kwekudiwa nemutemo. Hapana chinyorwa chakatsanangurwa kana zuva rekuvandudza rinoshandiswa muHurumende kana pane chero webhusaiti yakabatana inofanira kutorwa kuti iratidze kuti ruzivo rwuri muSebhisi kana pane chero webhuwo rehuwandu rakabatana rakagadziridzwa kana kuvandudzwa.
CHIKAMU 12 - KUSHANDISWA KWAKASIKWA
Kuwedzera dzimwe inorambidza sezvo kusimuka Terms of Service, imi hazvibvumidzwe kushandisa nzvimbo kana yayo kugutsikana: (a) nokuti chero chinangwa nomutemo; (B) vachikumbira vamwe kuita kana chinhanho chero asina murairo mabasa; (C) kuti haro dzakawanda, yeUnited, dzematunhu kana mamiriro mitemo, mitemo, mirayiro, kana nezviga omunharaunda; (D) kuti kanganisa pamusoro kana kutyora yedu zvedzidzo kodzero kana njere kodzero dzevamwe; (E) kuti vatambudze, kushungurudzwa, kunyomba, kukuvadza, kuchera, makuhwa, kuzvidza, kutyisidzira, kana sarura kwakavakirwa munhurume, zvepabonde, chitendero, dzinza, rudzi, zera, norudzi, kana urema; (F) kuzviisa zvenhema kana kuti anotsausa; (G) kuti Upload kana wokushandura mavhairasi mimwe mhando nokupopota remitemo kuti zvichaita kana kuti kushandiswa nenzira ipi kuti huchachinja functionality kana nokushanda Service kana chipi kufanana Website, dzimwe Websites, kana Indaneti kana; (H) kuunganidza kana kuchengeta ukama mashoko evamwe; (I) kuna spam, phish, pharm, chikonzero, dandemutande, kambaira, kana vadzime; (J) nokuti chero majee kana ounzenza chinangwa; kana (k) kupindira kana circumvent kuchengeteka zviri Service kana kufanana Website, dzimwe Websites, kana Indaneti. Isu kuchengetera kodzero zvokugumisa pakushandisa Service kana kufanana Website nokuti kutyora chero wairambidza tizvishandise.
CHIKAMU 13 - CHIKURIKIRO CHEVARARANTIES; KUTSVIRWA KWEVANHU
Iwe unobvumirana pachena kuti kushandiswa kwako, kana kusakwanisa kushandisa, basa racho riri pangozi yako. Basa nezvose zvakagadzirwa nemishandiro zvinopiwa kwauri kuburikidza nebasa iri (kunze kwekunyatsotsanangurwa nesu) zvakapiwa 'sezvazviri' uye 'sezviripo' zvekushandisa kwako, pasina chero mumiririri, zvivimbiso kana mamiriro emhando ipi zvayo, inogona kuratidza kana Rinoreva, kusanganisira zvose zvinonzi warranties kana mamiriro ekutengeserana, merchantable quality, kufanana kwechinangwa chairo, kusagadzikana, musoro, uye kusina kukanganisa.
Hapana mhaka ichaita hannari-shop, vatungamiriri vedu, vatariri, vashandi, vanobatanidzwa, vamiririri, makondirakiti, varidzi vebasa, vashandisi, vashandisi vebasa, kana marezinesi vane mhosva yekukuvara, kurasikirwa, kudiwa, kana chero zvakananga, zvisina kunanga, zviitiko, kurangwa, , kana zvakakonzeresa kukuvadzwa kwerudzi chero rupi zvarwo, kusanganisira, pasina muganho wakarasikirwa purofiti, mari yakarasika, mari yakarasika, kurasikirwa kwedatha, mari yekudzoreredza, kana chero kukuvara kwakafanana, kungave kwakavakirwa muchibvumirano, kurwiswa (kusanganisira kusaitira hanya), mhosva yakasimba kana neimwewo nzira, kubva pakushandisa kwese kwese sevhisi kana chero zvigadzirwa zvakawanikwa uchishandisa sevhisi, kana chero chero zvataurwa zvichipindirana neimwe nzira yekushandisa kwako kwesevhisi kana chero chigadzirwa, kusanganisira, asi zvisingagumiri, pane chero zvikanganiso kana kusara mune chero chipi chinhu. kana kurasikirwa kwese kana kukuvara kwemhando ipi neipi yakaitika nekuda kwekushandiswa kwesevhisi kana chero chinhu (kana chigadzirwa) chakatumirwa, chakapfuudzwa, kana neimwe nzira chichiwanikwa kuburikidza neshumiro, kunyangwe kana vachirairwa nezve zvavanogona. Nekuti dzimwe nyika kana masimba akatendera kusabvisirwa kana kuremerwa kwechisimba nekuda kwezvakakonzeresa kana zviitiko zvinokuvadza, mune dzakadaro nyika kana kutonga, mhosva yedu ichave yakaganhurirwa kusvika pakakwirira inotenderwa nemutemo.
CHIKAMU 14 - INDEMNIFICATION
Unobvuma kuisa mudzimba, kudzivirira uye kubata zvisina kukuvadza hannari-shop uye isu mubereki, makambani, vanobatanidzwa, vanobatika, vatariri, vatungamiriri, vamiririri, makondirakiti, marezinesi, vashandisi vebasa, vashoma inosanganisira inobhadharisa magweta emutongi, akaitwa chero wechitatu-bato nekuda kana kubuda kubva mukutyora kwako Mitemo Yekushandira kana magwaro avanobatanidza nereferenzi kana kutyora kwako chero mutemo kana kodzero dzekatatu.
CHIKAMU 15 - SEVERABILITY
Munguva chiitiko kuti chero urongwa Terms ava Service akatsunga kuva nomutemo, isina kana unenforceable, gadziriro yakadaro inofanira zvakadaro kuva enforceable zvizere akatenderwa mutemo zvinoshanda, uye unenforceable mugove anofanira akaonekwa kuti adziviswa Terms aya Service, kutsunga kwakadaro haafaniri kukanganisa anomutora uye enforceability zvimwe dzasara zvokudya.
CHIKAMU 16 - TERMINATION
Terms Ava Service dzinobudirira kutoti uye kusvikira wakagumiswa kana iwe kana isu. Unogona vanodimbura Terms izvi Service chero nguva kuburikidza kuzivisa nesu kuti hamucharambi kuda kushandisa Services yedu, kana apo hamuchadi uchishandisa yedu yepaIndaneti.
Kana yedu bedzi nokutonga ukatadza, kana isu vakafungidzira kuti uri kutadza, tatevedzera chero rokuti kana urongwa Terms idzi Service, isuwo vanodimbura chibvumirano ichi chero nguva pasina chiziviso uye muchagara akafanirwa nokuda mari zvose zvakafanira vakakwira uye kusanganisira zuva kugumiswa; uye / kana naizvozvo anogona kuramba kurapwa yedu Services (kana chikamu chayo).
CHIKAMU 17 - MUMAGARIRO WEMUMWE
Kukundikana tive kana manikidzira chero rworudyi kana urongwa Terms ava Service haafaniri kunganzi waiver yezvakarurama kwakadaro kana urongwa.
Terms Ava Service uye chero mitemo kana kuti uchishandisa mitemo re nesu panzvimbo iyi kana chokuremekedza kuti Musangano chinoumba yose chibvumirano uye nokunzwisisa pakati penyu uye isu Muchafambisa kushandisa kwaunoita Service, superseding chero asati kana panguva zvibvumirano, kukurukurirana uye vaitaura , kana nemumuromo kana zvichinzi, pakati pedu newe (kusanganisira, asi hakungoitwi, chero asati mushanduro Terms of Service).
Chero zvakawanda zviri kududzirwa Terms ava Service haringaiswi zvaizoita pamusoro kunyora urongwa hwezvinofanira kuitwa bato.
CHIKAMU 18 - MUTEMO WEMITEMO
Iyi Mitemo Yekushandira uye chero zvibvumirano zvakaparadzana zvatinokupa maSevhisi zvichazotongwa uye zvichinzi zvinoenderana nemitemo yeKagawa JP.
CHIKAMU 19 - KUSINZWA KUNA KUSHUMA
Unogona kudzokorora kupfuura mamiriro shanduro Terms of Service chero nguva peji ino.
Isu kuchengetera kodzero, panguva yedu bedzi kungwara, kuti dzifambirane, kushandura kana kutsiva chimwe chikamu Terms ava Service kuburikidza vaiswe inogadziridza uye kuchinja Website yedu. Zviri wako basa kuongorora Website kwedu nguva nenguva kuti kuchinja. Your akaramba kushandisa kana kuwana Website yedu kana Service kutevera Posting kuchinjwa kuti Terms ava Service kunoreva kubvuma kuchinja ivavo.
CHIKAMU 20 - KUTSWA KUNOGARA
Mibvunzo maererano neMigariro Yebasa inofanira kutumirwa kwatiri kushanyawewebsite@hannari-shop.com.
Kana kudana + 8150-5359-5775